गण्डकीमा २२ प्रतिशत रोपाइँ- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
गण्डकीमा २२ प्रतिशत रोपाइँ
प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये मनाङ र मुस्ताङमा धान रोपिँदैन, जेठमै मनसुन सक्रिय हुँदा रोपाइँ छिटो
असार १६, २०७८ प्रदेश ब्युरो
पोखरा — गण्डकी प्रदेशमा २२ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता ग्रीष्म न्यौपानेले धान रोपाइँ बल्ल सुरु भएको बताए ।
तनहुँको भानु–१३ खड्का गाउँस्थित पहेंले खेतमा धान रोप्नका लागि ब्याडमा बीउ काढ्दै रोपाहार ।
‘वर्षे धान जेठबाटै रोपिन्छ,’ उनले भने, ‘किसानलाई हिउँदे धान र मकै थन्काएपछि वर्षे धान रोप्ने बेला बल्ल भएको हो ।’ उनले गण्डकीका ११ जिल्लामध्ये मनाङ र मुस्ताङमा रोपाइँ नहुने बताए ।
कृषि मन्त्रालयका बागवानी विकास अधिकृत अर्जुनदेव ज्ञवालीले असार २५ पछि अधिकाशं स्थानमा धान रोपाइँ सम्पन्न हुने बताए । ‘चैते धान काटिए पनि अधिकांश ठाउँमा मकै छन्,’ उनले भने, ‘अहिले नै धेरै रोप्ने समय भएको छैन ।’ उनले साउनको १५ सम्म धान रोपाइँ गरिने बताए । उनले म्याग्दीमा ५७ प्रतिशत सबैभन्दा बढी धान रोपाइँ भएको बताए । तनहुँमा २८, लमजुङमा १०, नवलपुरमा ७, स्याङ्जामा ८, बागलुङमा १० र कास्कीमा २५ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । प्रदेशभरि १ लाख २० हजार ५ सय ३० हेक्टर क्षेत्रफलमा वर्षे धान रोपिन्छ । त्यसमध्ये १७ हजार ७ सय ९८ मा मात्र रोपाइँ भएको छ ।
गोरखामा २५ प्रतिशत
जिल्लामा २५ प्रतिशत धान रोपाइँ सकिएको छ । मनसुन छिटो सुरु हुँदा रोपाइँ पनि चाँडो भएको कृषि ज्ञान केन्द्र गोरखाका प्रमुख परशुराम अधिकारीले बताए । असार सुरुदेखि नै किसान रोपाइँमा व्यस्त छन् ।
गोरखाको झन्डै १२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा बर्खे धान खेती हुँदै आएको छ । धान खेतीको पकेट क्षेत्र मानिने दरौंदी, भुसुन्डे, जरेवर, चेपेफाँटका किसान बीउ काढ्न, रोप्न र जुडी (चैते) धान काट्न व्यस्त छन् । ‘मकै र जुडी धान नलगाएको क्षेत्रमा अहिले रोपाइँ भइरहेको छ,’ अधिकारीले भने, ‘अब मकै र जुडी भित्र्याएपछि अन्य असार २० पछि ती खेतमा रोपाइँ हुन्छन् ।’ चैते धान काट्ने र खेतमा लगाएको मकै थन्काउन किसानलाइ चटारो परेको हो । यहाँको सात सय २५ हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धान खेती हुँदै आएको छ ।
असार १५ को धान दिवसको कार्यक्रम आरुघाट गाउँपालिकामा मनाएको अधिकारीले बताए । आरुघाट १० र ५ नम्बर वडाको सय हेक्टर क्षेक्रफल समेटेर धान ब्लकको कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको अधिकारीले बताए । किसान बर्खे धानकोरूपमा सावित्री, मकवानपुर १, रामधान, हर्विनाथ १, सुख्खा ३, नेपाली हाइब्रिट जातका धान लगाउने गर्छन् ।
पर्वतमा ११ प्रतिशत
जेठमै मनसुन सक्रिय भएका कारण पर्वतमा यो वर्ष धान रोपाइँ छिट्टै सुरु भयो । त्यसको प्रभावकै कारण अघिल्ला वर्षहरूमा धान दिवस (असार १५) सम्म १० प्रतिशत खेतमा समेत रोपाइँ नहुने गरेकोमा यो वर्ष मंगलबारसम्म ११ प्रतिशत खेतमा धान रोपाइँ भएको छ ।
कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार २८ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये साढे ८ हजार हेक्टरमा धान रोपाइँ हुन्छ । मंगलबारसम्म करिब एक हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ भइसकेको कार्यालयका बागवानी विकास अधिकृत विश्वास काफ्लेले बताए । ‘धान रोपाइँको अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा सन्तोषजनक छ,’ उनले भने, ‘कोभिडको प्रभावले गर्दा धान खेत बिस्तार भएको पनि छ ।’ कोभिडका कारण गरिएको लकडाउनले गाउँ फर्किएकाहरूले बाँझिएको खेतबारीमा खेती
लगाउन सुरु गरेपछि जिल्लाभर करिब एक हजार हेक्टर क्षेत्रफल धानखेत बढेको अनुमान प्राविधिकको छ । ‘रोपाइँको साताअघिदेखि हलगोरु र हलीबाउसेको चिन्ता हुन्थ्यो,’ फलेबास–४ का शालिग्राम लामिछानेले भने, ‘अहिले आलीकान्ला मिलाएपछि सानो ट्याक्टरले चार हलको मेलो एकैदिनमा तयार हुन्छ । धेरै सहज छ ।’
कृषि ज्ञान केन्द्रको तथ्यांकअनुसार साढे ८ हजार हेक्टरमा लगाइएको धानखेतबाट अन्दाजी ३० हजार टन धान उत्पादन हुन्छ । यो पर्वतको जनसंख्याले वर्षभरिमा खपत गर्ने खाद्यान्नको करिब ४० प्रतिशत हिस्सा हो ।
प्रकाशित : असार १६, २०७८ ११:४६
रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान निर्माण लागत ११ अर्ब
डीपीआर तयार पार्न मात्र १५ करोड रूपैयाँ लाग्ने अनुमान
असार १६, २०७८ अवधेशकुमार झा
राजविराज — सप्तरीको राजविराजमा निर्माण हुने भनिएको रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको संरचना बनाउन ११ अर्ब रकम खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यसबारेमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र प्रतिष्ठानको पूर्वाधार तयारी विकास समितिका पदाधिकारीबीच छलफल भएको थियो ।
यस्तै, प्रतिष्ठानको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्न मात्र १५ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको समितिका निर्देशक डा. रञ्जितकुमार झाले बताए । प्रतिष्ठानको संरचना निर्माण गर्न हालै मात्र सरकारले राजविराज नगरपालिका १० विरौलमा ६२ बिगहा जग्गा ३० वर्षका लागि भाडामा दिने निर्णय गरिसकेको छ ।
नगरपालिकाले सिफारिस गरेबमोजिम सरकारले जग्गा भाडामा दिएको हो । यद्यपि, जग्गा खाडो नदीको किनारमै छ । संरचना निर्माण भएपछि नदीले समस्या नगर्ने तरिकाले काम गर्नुपर्ने इन्जिनियरहरूले सुझाएका छन् । एक दशकअघिसम्म उक्त जग्गा भएर नदी बग्ने गर्थ्यो । पछि बाँध निर्माण भएपछि उक्त जग्गा उकास भई प्रयोग गर्न लायकको भएको हो । यद्यपि, प्रतिष्ठानको संरचना निर्माणपूर्व नै छेउमा च्यानल बनाउनुपर्ने सुझावसमेत इन्जिनियरहरूले दिएको डा. झाले बताए ।
आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा प्रतिष्ठानको पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारले ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । उक्त रकम खर्च हुन नसकी फ्रिज भयो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले प्रतिष्ठानका लागि ११ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । दोस्रो चौमासिकसम्म रकम माग गर्न नसकेपछि अर्थ मन्त्रालयले प्रतिष्ठानका लागि विनियोजित ११ करोड रुपैयाँबाट साढे ६ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरी अन्य योजनामा लगाएको छ । बाँकी साढे ४ करोड प्रतिष्ठानको सहयोगी अस्पतालको रूपमा रहने गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालको पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्ने सहमति दिइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा प्रतिष्ठानका लागि बजेट छुट्याइएको भनिए पनि रकम भने तोकिएको छैन । ‘सरकारले प्रतिष्ठान निर्माणमा तदारुकता देखाए ११ अर्ब संघ सरकारका लागि धेरै बजेट होइन,’ राजविराजका नगरप्रमुख शम्भुप्रसाद यादवले भने, ‘स्थानीयस्तरबाट हुने हरेक सहयोग गर्न तयार छौं ।’ संघ सरकारले ०७५ पुसमा प्रतिष्ठान निर्माणको निर्णय गरेको थियो ।
प्रकाशित : असार १६, २०७८ ११:३१